Neymar JR Iyo Thiago Silva Oo Qarka U Saaran Inay Isku Dhacaan & Sababta Oo La Ogaaday %
Iyadoo ay sii kordhayaan wararka sheegaya in tababare Unai Emery, uusan hogaamin doonin kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain, ayaa waxaa shaqsigii lagu bedali lahaa ku kala arki duwan Neymar iyo Thiago Silva, oo saameyn ku leh go’aamada kooxda.
Inkastoo, labadaan ciyaaryahano ay yihiin kuwa waa weyn hadana kooxda muhiim u ah, ayaa waxay kala wataan labadaan tababarayaal, kuwaasoo ay doonayaa in lagu bedalo Unai Emery, sida ay baahinayaa warbaahinta wadanka Faransiiska.
Shaqada kooxda reer France ayaa waxaa hada usharaxan inay kala wareegaan Emery, macalimiinta kala ah: Luis Enrique, Simeone, Ancelotti iyo kuwa kale oo badan.
Neymar, ayaa wuxuu doonayaa in shaqada PSG, loo gacan geliyo Luis Enrique, kaasoo ay horey ugu soo wada shaqeeyeen camaaliqada horyaalka Spain ee Barcelona.
Laakiin saaxibkiisa ay isku dalka yihiin ee Silva, ayaa wuxuu raba inuu dib u arko macalin Carlo Ancelotti, kaasoo ay kusoo wada shaqeeyeen horyaalka wadanka Talyaaniga.
Waxaa jira ciyaaryahano kale, kuwaasoo doonaya in shaqada loo dhiibo Antonio Conte, kaasoo hada uu shaki badan ku jiro waayihiisa Chelsea, laakiin Neymar ayaa wuxuu yahay mid aanan jecleen falsafada uu ku dheelo Conte.
Muranka ka dhashay arrintaan ayaa waxay soo warineysaa warbaahinta Faransiiska in laga dareemayey qolka labiska ee PSG maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo waqti xaadirkaan ay ku kala maqan yihiin ciyaartoyda waajibaadka xulalkooda.
Sikastaba, arrintaan ayaa waxaa awood badan u leh inuu xaliyo Sheikh Nasser Al-Khelaïfi, oo ah Madaxweynaha PSG, iyadoona ay ka digayaa Khubarada in tani ay keento inay isku dhacaa ciyaartoyda, halkaasina kooxda ku wahayso xidigo waa weyn oo muhiim ah.